Ku soo ogow qaabka qurxinta guriga ' Bezzia
Susana Garcia | 07/06/2021 20:00 | Qurxinta, Isbeddellada qurxinta
El qaabka casriga ah ee loo yaqaan 'ricic chicic chicic style' ayaa maalmahan aad looga mahadceliyaa, waa iskudhaf weyn oo gogo 'casri iyo qaybo casri ah, guridda iyo hadda. Isbarbardhigyadu waa khiyaano weyn oo lagu qurxiyo, maaddaama sidan oo kale aanan si gaar ah ugu dhegganayn hal qaab oo aan u abuurin waxyaabo gaar ah oo gaar ah. Had iyo jeer way kafiican tahay isku dhafka qaababka iyo helitaanka guri leh shakhsiyan halkii aad ka heli lahayd nuqul qaab gaar ah oo daali kara.
El Qaabka loo yaqaan 'rustic chic style' waa qaab riwaayad ah oo doonaya inuu siiyo taabasho aad u qurux badan iyo jawi casri ah oo laga helo deegaanno daaqsimeed ah. Noocyada noocan ah waxaa dhiirrigeliya waddanka, meelaha bannaan, halkaas oo ay ku yaalliin agab dusha ka muuqda iyo qaybo shaqeynaya, laakiin taabashada ayaa kaa caawinaysa inaad casriyaynayso oo aad ku guuleysan karto xarrago mararka qaarkood maqan.
1 Alaabada dabiiciga ah
2 Iftiinka iyo hooska dabiiciga ah
3 Ku dar ubaxyo iyo dhir
4 Alaabta guryaha ee Faransiiska
5 Marmar iyo dhoobada
ka qalabka dabiiciga waa qayb aasaasi ah oo ah qaabka rustic-ka, sidaa darteed ma qaban karno iyaga la'aantood. Alwaaxda ku jira alaabta guriga, rattan, dambiilaha digaagga iyo xitaa dhagxaanta dhagxaanta ayaa kufiican abuurista jawiga rustic ee aad hadhow ku dari karto taabashada xiisaha leh. Rustic-ka waa inuu ahaadaa aktarka, maxaa yeelay waa qaabka aasaasiga ah. Alaabta alwaaxda ah ayaa badanaa duug ah ama waxay leeyihiin muuqaal dabiici ah, xoog leh, oo aan lahayn qurxin badan. Dabaqyada alwaaxda ama dhagaxa ayaa sidoo kale badanaa la isticmaalaa Dhinaca kale, qalab badan oo loo yaqaan 'wicker' ayaa loo isticmaalaa, dambiilo ama roogag ku jira qalabkan quruxda badan oo aad u daaqa.
Iftiinka iyo hooska dabiiciga ah
Qaabkan, a taabato wax badan oo ka casrisan bey'adaha rookaha. Codadka iftiinka ayaa naga caawinaya inaan yareyno taabashadaas rustic ah, maxaa yeelay deegaanadii hore waxay lahaayeen qoryo badan oo mugdi ah iyo codad xoog leh oo qolalka damiya. Xaaladdan oo kale waxaan raadineynaa hooska sida caddaanka, cawl iyo gaar ahaan beige oo khafiif ah, jilicsan isla markaana sidoo kale bixiya diirimaad. Jawiga noocan ah macno badan ma samaynayso in la raadiyo qaybo midabyo badan leh, maxaa yeelay deegaanka rustic inta badan maahan.
Ku dar ubaxyo iyo dhir
Lo rustic wax badan ayey ku leedahay baadiyaha iyo dabeecadda, sidaa darteed dhirta qaar lagama waayi karo goobahan. Maalmahan, dhirta waxaa si ballaaran loogu qaataa gudaha, dhirta waaweyn iyo kuwa yaryarba, si loo abuuro geeso gaar ah. Fikradda waa in lagu daro xoogaa cusub iyo midab leh dhirta. Raadi dheryo qurxoon oo hooska iftiinka ah ama ku dar dheryaha digaagga.
Alaabta guryaha ee Faransiiska
In kasta oo aan ka wada hadalnay qodobbada nagu hoggaaminaya qaabka rustic, haddana waa inaan sidoo kale ka fikirno ku darista taabashada ugu xiisaha badan. Waxaad ku heli kartaa tan alaabta guriga qaarkood oo ah qaab faransiis ah. Qaabkani wuxuu ka kooban yahay alaab guri oo u qaabeysan faahfaahin badan, guntin leh iyo lugo xardhan. Ku darista hal ama laba qaybood oo ah alaabta guriga qaabkani waa in ka badan inta ku filan si loo abuuro taabasho yar. Intaa waxaa dheer, qaabka guridda ayaa ka mid ah qaybaha Faransiiska sidaas darteed waxaan abuuri doonnaa jawi aad u qaas ah.
Marmar iyo dhoobada
Qalabka Rustic waxay u muuqdaan kuwo qallafsan oo aan qurxin. Laakiin si loo abuuro jawi aad u qurux badan waxaan ku dari karnaa noocyo kale oo qalab ah. Ku marmar waa mid aad u qurux badan waana taas sababta loogu isticmaalo deegaanadan. Waxay u noqon kartaa gabal meesha dabka lagu shito, miis marmar ah ama xitaa taabashada dusha sare ee sheyga. Marmar waa xarrago, gaar ahaan haddii aan dooranno midabbo sida cawl iyo caddaan. Dhinaca kale, dhoobada sidoo kale waxay leedahay taabashadaas xarrago leh, markaa waxaan ku dari karnaa faahfaahin yar sida fijaanno ama tirooyin qurxin. Faahfaahinta yar yar waxaad ku arki kartaa taabashada casriga ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Sida loogu qurxiyo qaab dhismeedka birlabta ah